RC Izimoto for Kids KOOWHEEL buqama Car 360 ujikelezisa 4WD Off Road Double emaceleni ujikelezisa ukuwa - ngo-2.4Ghz High Speed ​​Rock abakhasi Vehicle nge izibani Izingane Lokuzalwa Izipho RC Car for Kids - Jomo Technology Co., Ltd
RC Izimoto for Kids KOOWHEEL buqama Car 360 ujikelezisa 4WD Off Road Double emaceleni ujikelezisa ukuwa - ngo-2.4Ghz High Speed ​​Rock abakhasi Vehicle nge izibani Izingane Lokuzalwa Izipho RC Car for Kids
Isivinini 1.High futhi off road: Imoto has izinjini ezimbili ezinamandla 4WD, ukuqinisekisa ijubane layo uma igijima okusezingeni eliphezulu. Amasondo nezimo kakhulu, kulula ukwenza ematfuba okusheshayo.
Isipho 2.Best izingane: nge 2.4GHz umsakazo uhlelo elawulwa kude, imoto RC lekutalwa ephelele, Christmas nezipho zezingane.
3.All izinhlobo namaqhinga: 360 degree Stunt phezulu design, efanelekayo izingane zakho noma ithoyizi izimoto Lover. Izinhlangothi kabili egijima, phambili, emuva, jikela kwesokunxele, jikela kwesokudla, 360 degree ukuwa phezulu. Rc imoto nje oqhubeka uya kungakhathaliseki ukuthi bashaye noma ihlala kanjani, ukukunika ukuzizwela okuhlangene futhi ezahlukene cool!
4.High izinga impahla: eliphezulu plastic, ngokuqinile futhi iqine imoto umzimba, mazombezombe kakhudlwana futhi crashworthiness. Amathayi akhiwe ngerabha, kulula kakhulu ukuba sinqobe isimo ongaphandle.
5.Guarantee: imoto lisebenzisa 3.7V le-400mAh Ibhethri elishajekayo (okufakiwe) enentambo ye-USB (kuhlanganisiwe), 15 - 20 amaminithi ukudlala isikhathi, amahora ama-2 Ukushaja isikhathi. KOOWHEEL ukunikeza imali egcwele noma ukushintshanisa entsha oda kungakapheli izinsuku ezingu-30. Ukulungele impendulo 24 hours.So engeza ekalishini manje!
Previous: RC Izimoto KOOWHEEL 1:16 Scale 2WD Off Road yesilawuli kude Izimoto nge 2 elishajekayo Ibhethri 2.4GHz Radio buqama Truck Monster High Speed ​​abakhasi Ishaja ye-USB RC Car Abadala kanye Kids (Blue)
ID yomkhiqizo (UPC): 6958210300936
2.4G CONTROL EZIKUDE CAR
2.4 GHz ukulawula umsakazo: eqinile anti-ukuphazamiseka, letisita izimoto eziningi ngezimoto ndawonye ngesikhathi esifanayo futhi indawo. Uma uthola 2 ngaphezulu iloli KOOWHEEL rc, kuba mnandi kakhulu ukusebenzisa izimoto eziningi ndawonye.
Ukulawula umsebenzi Okugcwele, phambili / ukuhlanekezela / kwesobunxele / kwesokudla. Lokhu elawulwa kude Car has eziqondisa esitebeleni kakhulu futhi mpintsha, esikude ergonomic ayikwazanga ukuqinisekisa Isilawuli eliphakeme lomqali.
3 izizathu ngezansi elifushane ukushayela esigcwele ibhethri: Isikhathi ukushaja lifushane kakhulu ukusekela umdlalo.
Awuzange uphelelwa ibhethri ngaphambi kokuwushaja.
Impilo yebhethri uzobe unciphise uma ungazange ususe ibhethri kusuka emotweni ngemuva kokusebenzisa.
yesilawuli kude x1
elishajekayo 6.4V / 700mAh kwebhethri Car x2
USB ishaja x1
HD 720p FPV Ikhamera
ukufakwa kokumqoka kuphela x1
Radio Emapheshana: 2.4GHz
Ukushaja isikhathi: 180mins
Battery life: mayelana 15mins
Control Ibanga: 100 izinyawo
Isivinini: 15KM / H
ibhetri lemoto: 3.6V 600mA ibhethri
Ibhethri Isilawuli kude: 2 * 1.5V AA amabhethri ( Hhayi Kufaka)
Imisebenzi: Jikela ngakwesokunxele, jikela ngakwesokudla, phambili nasemuva
Iphakheji Ubukhulu: 16.1 x 11 x 3.9 amayintshi
isisindo Net: 1.1 amakhilogremu
ngenyanga 12 esikhundleni yesiqinisekiso, ukuphila konke zokulungisa.